I-Manichaeism yindlela egqithiseleyo ye- gnosticism . I-gnostic kuba ithembisa usindiso ngokufumana ulwazi olukhethekileyo lweenyaniso zokomoya. Yinyani ngenxa yokuba ithetha ukuba isiseko semvelo siyichasene nemigaqo emibini, elungileyo kunye nobubi, elo lilinganayo kumandla athile. I-Manichaeism ibizwa ngokuba ngumntu onqulo ogama linguMani.
Ngubani o wa
UMani wazalwa kwintshona yeBhabheli malunga nonyaka we-215 okanye ngo-216 CE waza wafumana isityhilelo sakhe sokuqala eneminyaka eyi-12.
Uneminyaka engama-20 ubudala, ubonakala egqibile inkqubo yakhe yokucinga waza waqala umsebenzi wezithunywa zevangeli kulo nyaka wama-240. Nangona wathola inkxaso ngenkqubela kwababusi basePersi, yena kunye nabalandeli bakhe ekugqibeleni batshutshiswa kwaye ubonakala efile entolongweni ngo-276. Kodwa ke, iinkolelo zakhe zazisasaza iJiputa kwaye zatsala abaphengululi abaninzi, kuquka uAgasine.
Manichaeism kunye nobuKristu
Inokuthi i-Manichaeism inqulo lwayo, kungekhona ukunyaniseka kwamaKristu. UMani akazange aqale njengomKristu aze aqale ukwamukela iinkolelo ezintsha. Ngakolunye uhlangothi, i-Manichaeism ibonakala ithathe indima ebalulekileyo ekuphuhlisweni kwamatyala amaninzi angamaKristu - umzekelo, i-Bogomils, i-Paulicians kunye ne- Cathars . I-Manichaeism yaye yachaphazela nokuphuhliswa kwamaKristu angama-orthodox - umzekelo, uAgasine waseHippo waqala njengomntu waseMichaean.
I-Manichaeism kunye neNkcazo yokuHlola
Namhlanje akuqhelekanga ukunyaniseka kobuqhetseba obubuKristwini obusisiseko sokuthi kubhalwe njengendlela yoManichaeism yanamhlanje.
Iimfundiso ezikhoyo zanamhlanje azizange zithathe i-cosmology ye-Manichaean okanye isakhiwo secawa, ngoko ke akunjalo nje ukuba ngaba balandeli balolu kholo. I-Manichaeism iye yaba yi-epithet ngakumbi kunegama lobugcisa.
Ziziphi iiAnts zomlilo?
Imbali emfutshane yeShayina eCuba
I-Kennesaw State University Admissions